FANADIHADIANA MIKASIKA NY ANTOKO POLITIKA SY IREO MPITARIKA AZY | Pakysse
FANADIHADIANA MIKASIKA NY ANTOKO POLITIKA SY IREO MPITARIKA AZY
mars 25, 2011 in Asa sosialy, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fiainam-pirenena, Fikambana, Foko Blog Club, Madagasikara, Malagasy, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet
<strong>Ity fanadihadiana ity dia fandraisana andraikitra noraisin’ny fikambanana foko-madagascar mba hitsapana ny hevitr’ireo olom-pirenena malagasy. Ny faritra eto Antananarivo ihany aloa no tratra. Miisa 10 ireo ankizy mpitoraka bilaogy manao izany fanadihadiana izany ary ny valiny dia alefa amin’ny haino aman-jery. Ny fikambanana foko dia tsy manao politika fa ireo mpikambana kosa dia afaka maneho ny heviny malalaka daholo. Mankasitraka antsika mba tsy hanisy loko ny fikambanana ary mangataka antsika mba ankahery ireo ankizy manao izany fanadihadiana izany.
Olona 1000 ny tanjona ary amin’izao fotoana ziao dia efa miisa 800 ny voaadina, ny valiny dia mbola ho avy eo ihany miaraka amin’ny « interpretation » sy ny « graphe »
□ Lahy □ Vavy
Faritra sy Fokontany :
A/ Ny hevitrao momba ireo mpanao politika Malagasy?
□	Tsy ilaina
3.	Hevitra hafa:
B/ 50 taona tao aorianan’ny nahazoana ny fahaleovan-tena dia mbola mijaly sy sahirana foana ny firenena sy ny vahoaka Malagasy. Araka ny hevitrao, inona ny toetra tokony ananan’ireo mpanao politika mba hitsinjovana ireo mponina ao aminy sy tokony hampandrosoana ny firenena?
□	Tsy mamadika palitao
□	Manaraka ny fitsipi-pifehezan’ny antoko
□	Manaja ny teny nomena dia arahina asa izany
□	Tokony manana tetik’asa fampandrosoana mazava tsara
□	Hevitra hafa:
D/ Ahoana ny fahitanao ny fandraisan’anjaran’ny tanora eo amin’ny fiainam-pirenena eto Madagasikara?
□	Tsy misy mihitsy
□	Misy tanora vonona ihany fa tsy mahasahy miditra an-tsehatra
□	Misy tena sahy mandray anjara
□	Misy mandray anjara ihany fa tsy misy vokany
E/ Araka ny hevitrao, iza amin’ireto fikambanana politika ireto no tokony hitondra any Madagasikara?
□	AREMA Pierrot Rajaonarivelo
□	AREMA Ratsiraka
□	Leader Fanilo
□	3 Mouvances
□	TIM Raharinaivo
□	TIM Ravalomanana
□	TIM yves Aimés
□	Fikambanana hafa:
F/ Ny fiainana ara-politika eto Madagasikara dia mbola somary mikorontana ihany. Inona ny antony mety mahatonga izany araka ny hevitrao?
« When the US Embassy Madagascar use new media to promote diplomacy
Malagasy united « CHANGE » »